တောင်သမန်သားလေး: September 2015
Public Wi-Fi များ၏ လျှို့ဝှက် အန္တရာယ်များ
Ref : http://www.cnet.com/how-to/tips-to-stay-safe-on-public-wi-fi/
ချစ်သူဖုန်းထဲက SMS ကို ခိုးကြည့်နိုင်မယ့် Total SMS Control
ဒီ Application က တစ်စုံတစ်ယောက်ဖုန်းထဲက SMS နှင့် Call log တွေကို ခိုးကြည့်ချင်သူတွေအတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ့် အပိုင်းလေးတွေတော့ ရှိတာပေါ့နော်။ Spy Application တွေကတော့ ဒီလိုပါပဲ။ သူငယ်ချင်းတို့ စိတ်ဝင်စားရင် ဆက်ဖတ်ကြည့်ပါ ကျွန်တော် နည်းနည်းပြောပြပါမယ်။
ကိုယ့်ချစ်သူဖုန်းထဲက SMS နဲ့ Call Log ကို ကြည့်ချင်တယ်ဆိုပါစို့…
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Application လေးကို သူ့ဖုန်းထဲမှာ Install လုပ်ပြီးဖွင့်ပါ။
Welcome Box ပေါ်လာရင် Ok နှိပ်ပါ။
Forwarding Mode မှာ ရွေးစရာ သုံးခုရှိပါတယ်။
*Forward to Email
*Forward to Twitter
*Forward to SMS
သူ့ဖုန်းထဲက SMS တွေ ကိုယ့် Gmail ထဲ ရောက်စေချင်ရင် -Forward to Email- ကို ရွေးလိုက်ပါ။ မှတ်ချက်။ ။သူ့ဖုန်းအင်တာနက် ဖွင့်ချိန်မှ အဲဒီ SMS တွေဟာ ကိုယ့် Gmail ထဲ ဝင်လာမှာပါ။
သူ့ဖုန်းထဲက SMS တွေ ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့  Message Inbox ထဲ ရောက်စေချင်ရင် -Forward to SMS- ကို ရွေးလိုက်ပါ။ မှတ်ချက်။ ။သူ့ဖုန်းထဲမှာ Phone Bill ရှိမှ အဲဒီ SMS တွေဟာ ကိုယ့်ဖုန်း Message Inbox ထဲ ဝင်လာမှာပါ။
သူငယ်ချင်းတို့ အဆင်ပြေမယ်ထင်တာ ရွေးလိုက်ကြပေါ့နော်။ ကျွန်တော်က Forward to Email ကို ရွေးထားတယ်။
Forward to Email ကို နှိပ်လိုက်ရင် Email Setting ပေါ်လာမယ်။
Notification ပါတဲ့ စာကြောင်းကလွဲရင် ကျန်တာအားလုံး အမှန်ခြစ်ပေးပါ။
အောက်ဆုံးမှာ Set up Destination Email Address ဆိုတာကို နှိပ်ပါ။
မိမိ Gmail အကောင့်ထည့်ပြီး Save…။ Gmai Password ထည့်ပြီး Ok နှိပ်ပါ။ အခုသူငယ်ချင်းထည့်ခဲ့တဲ့ Gmail ထဲကို SMS တွေ ဝင်မှာပါ။ Email Setting ပြင်ဆင်တာကတော့ ပြီးပါပြီ။
ဒီ Application ကို သူ့ဖုန်းထဲမှာ ဒီအတိုင်းထားခဲ့ရင် သူသိသွားမှာပေါ့။ ဒါကြောင့် Secret Code လေးသုံးပြီး ဒီ App လေးကို ဖျောက်ထားရအောင်။
Parental Control Mode ကို On လိုက်ပါ။ Yes နဲ့ No ပေါ်လာရင် Yes ကို ရွေးပြီး မှတ်မိမယ့်နံပါတ် ရိုက်ထည့်…ပြီးရင် Save နှိပ်ပါ။ နောက်တစ်ခါ ဒီ Application ကို မြင်ချင်ရင် Keypad မှာ အခုဏက နံပါတ်ကို ရိုက်ပြီး Call နှိပ်မှ ဒီ App က ပွင့်လာမှာပါ။ အဲလိုမဟုတ်ရင် App List ထဲမှာ ရှိနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖျောက်ထားတာပေါ့…
နောက်တစ်ခု ပိုပြီး လြုံခုံသွားအောင် Enable Secure Uninstallation ကို On လိုက်ပါ။ Yes ကို ရွေးပြီး Activate ကို ဆက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ဒါဆိုပြီးပြီဗျာ… Forward to SMS နဲ့သုံးမယ်ဆိုလည်း အတူတူပါပဲ။
Forgot your phone at home? Can’t take it to work? SMS Diversion will forward all text messages to your Gmail account or any other phone that you specify. Can also forward name and number of missed calls with contact list integration. Forgot to turn SMS Diversion on before leaving? No problem, remote activation allows for turning forwarding on or off by sendingapredefined text message to your phone! Does not support MMS.
Forward name and number of missed calls
Forward to any email account
*** Does not support MMS***
SMS Diversion Pro v2.0 Apk ( 1.35 mb) | Mirror
Posted by lin linn at 5:56 AM
Hardware Course ဆိုင်ရာ Components များအကြောင်း(ဖိုးစပ်စု)
(ဖိုးစပ်စု) ရဲ့ Hardware Course ဆိုင်ရာ Components များအကြောင်းကို
ယခု Hardware Course ဆိုင်ရာ Components များအကြောင်းမှာတော့
ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ powersection ပိုင်းမှာပါဝင်တဲ့ components လေးတွေရဲ့အခေါ်အဝေါ်နဲ့ 
ပေါင်းစပ်အလုပ်လုပ်ပုံ။ဖြစ်တတ်တဲ့ error များနဲ့ ပြုပြင်ပုံတို့ ကိုအခုမှစတင်လေ့လာနေတဲ့ညီငယ်
Hardware Course ဆိုင်ရာ Components များအကြောင်းမှာ
လေ့လာရမယ့် Components များကတော့
၄။ FET နဲ့ SOT
အထက်ဖေါ်ပြပါ ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ powersection ပိုင်းမှာပါဝင်တဲ့
ဖြစ်တတ်တဲ့ Error များအကြောင်းကိုလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့
Download Here (263.24KB)
Posted by lin linn at 5:55 AM
Posted by lin linn at 5:54 AM
LG G Stylo version 5.1.1 ကို ROOT လုပ်ချင်သူတွေအတွက်
Author: Ko Htoo September 29, 2015
Android Tutorials, Android ဖုန်း root လုပ်နည်းများ
LG G Stylo ရဲ့ version 5.1.1 ကို Root လုပ်ချင်သူတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး လိုအပ်တာကတော့ TWRP recovery နဲ့ SuperSU-update.zip လေးပါပဲ။
လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်လေးနှစ်ခုကို အောက်ကလင့်ကနေ Download ရယူလိုက်ပါ။
TWRP recovery >>> http://androidhost.org/AW6BF
SuperSU-update.zip >>> https://download.chainfire.eu/696/SuperSU/UPDATE-SuperSU-v2.46.zip
အရင်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့ data တွေရှိပါက back-up ပြုလုပ်ထားလိုက်ပါ။
နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ ဖုန်းကို Recovery mode ၀င်ပြီး ဖုန်းကို Factory data
reset ချလိုက်ပါ။ အရင်ဆုံး Clear cache နဲ့ cache ဖိုင်တွေရှင်းလိုက်ပါ။
ပြီးမှ Factory reset ချလိုက်ပါ။ wipe dalvik cache ပါပါက အဲဒါလေးပါ လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ Download ရယူထားတဲ့ TWRP recovery zip ကို Flash ပေးလိုက်ပါ။
နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ SuperSU-update.zip ကိုပါ install လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ Reboot system now နဲ့ ဖုန်းကို Reboot ချပေးလိုက်ပါ။
Posted by lin linn at 5:52 AM
Posted by lin linn at 5:48 AM
Labels: Android offline Readers (အင်တာနက် ငါးမီးနစ် ဖွင့်ပြီး Offline ဖြင့် သတင်းစုံဖတ်ရန်) Apk
မြန်မာ ရှမ်းကိုးမီး ဖဲလေး အွန်လိုင်းချိတ်ကစားမယ်-Shan Koe Mee APK
မြန်မာ ရှမ်းကိုးမီး ဖဲလေး အွန်လိုင်းချိတ်ကစားမယ်-Shan Koe Mee APK ဂိမ်းကောင်းလေးပါ မြန်မာ ဂိမ်း Devepolmer (Total Game Play store) ကထုတ်လုပ်တဲ့ အွန်လိုင်းဂိမ်းကောင်းလေးပါ
Posted by lin linn at 5:43 AM
ဆယ်ဖီချစ်သူများအတွက် အမိုက်စား ဆယ်ဖီ Gadgets (၈)ခု
ဒီခေတ်ကြီးမှာ တစ်ယောက်ထဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ အဖွဲ့ လိုက်ဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ အခါ သူများကို ရိုက်ခိုင်းတာထက် ကိုယ်တိုင်ကိုင်ပြီး ရိုက်ရတာလည်း ဖီလင်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဖော်ပြမဲ့ အမိုက်စားဆယ်ဖီ Gadgets များဟာ ဆယ်ဖီချစ်သူများအတွက် အကြိုက်တွေ့ စေမဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။
(၁ ) Selfie ဦးထုတ်
လန်ဒန်မြို့ မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Fashion Week 2014 မှာ ပြသခဲ့တဲ့ Selfie ဦးထုတ်ပါ။ ဆယ်ဖီချစ်တဲ့ ပျိုပျိုမေတို့ အတွက် အလန်းစား ဆယ်ဖီဖက်ရှင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သူက ဦးထုတ်မှာ တွဲပြီး Selfie ရိုက်ဖို့ အတွက်သီးသန့် လုပ်ထားပါပါတယ်။
(၂) Selfie Toaster
အိမ် မှာ ပေါင်မုန့် မီးကင်စားရင်း ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်စေမဲ့ ဆယ်ဖီပေါင်မုန့် မီးကင်စက်ပါ။
US က ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ထုတ်လုပ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်ကို ၇၅ ဒေါ်လာနဲ့ ရောင်းချပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီစက်မှာ ပုံပေါ်ဖို့ မိမိပုံကို ကုမ္ပဏီကို ပို့ ပေးရမှာ ဖြစ်ပြီး တစ်ပတ်တစ်ခါ လိုချင်တဲ့ ပုံကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်တဲ့။
(၃) Baby Selfie App
ကလေးငယ်လေးတွေ အတွက် Selfie ရိုက်တဲ့ အခါ ပုံလှလှလေး ထွက်စေဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ App ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးအဖေတစ်ဦးက ဒီ App ကို တီထွင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဒီApp က ကလေးငယ်များကို ဖုန်းနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ အခါ
စိတ်ဝင်စားမှု ဖြစ်အောင် ကာတွန်းဂိမ်းလေး တစ်ခုနဲ့ ဆွဲဆောင်ထားပါတယ်။ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ ရုပ်ကြွလေး ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပြီးကလေးငယ်လေးက စိတ်ဝင်တစား ကြည့်နေတဲ့အခါ အလိုအလျောက် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၄) Belfie Stick
မိမိ နောက်ပိုင်းကို သီးသန့် ရိုက်ဖို့ အတွက် လုပ်ထားတဲ့ Belfie Stick ပါတဲ့။ မိမိရဲ့ လှပတဲ့ နောက်ပိုင်းကို တကူးတကရိုက်ကူးနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောအလှ ၊ တင်အလှ ၊ ခါးအလှတွေကို သူက ကွင်းကွင်းကွတ်ကွတ် ရိုက်ကူးပေးပါလိမ့်မယ်။
(၅) Selfie Drone
လက်မှာလည်း ပတ်ထားလို့ ရပြီး ပျံသန်းကာ Selfie ရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ Selfie Drone ပါတဲ့။
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ပျံသန်းနိုင် ဝတ်ဆင်လို့ ရနိုင်တဲ့ ကင်မရာ တစ်လုံး အနေနဲ့ ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိုင်ဒီယာကတော့ မိမိလက်ကနေ ရုတ်တရက် ပျံသန်းကာ လျပ်တစ်ပြတ်ဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူးပေးပါလိမ့်မယ်။
ပြီးရင် မိမိရှိတဲ့နေရာဆီကို တိတိကျကျပြန်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့။ ဒီတော့မိမိရဲ့ လျပ်တစ်ပြတ်လှုပ်ရှားမှု ဓာတ်ပုံများကို လက်မလွတ်ရတော့ပါဘူး။
(၆) 3D Printed Mayonnaise Selfie
မိမိပုံကို ဘာဂါပေါ်မှာ မရောနစ် နဲ့ 3D ပုံဖော်ပေးမဲ့ Selfie ပုံဖော်တဲ့ဟာလေးပါ ။ Hellmann ဆိုတဲ့ အဖွဲလေးက တီထွင်ထားပြီးသူတို့ဘာဂါ ရောင်းတဲ့ ထရပ်ကားပေါ်မှာ တပ်ဆင်ထားပြီး ဘာဂါလာဝယ်တဲ့သူတွေကို ပုံရိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ တပ်ဆင်ထားတဲ့စက်ကလေးနဲ့ လူပုံကို မရောနစ်ရည်နဲ့ ဖော်ပေးပြီး ရောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။
(၇) Selfie Brush
Selfie ချစ်သူတို့ အတွက် ဆံပင်ဖီးရင်း ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်မဲ့ ဟာလေးပါ။ သူက ဘီးနောက်မှာ ဖုန်းထည့်တဲ့ နေရာလေးပါပြီးဘီးအနေနဲ့ ရော Selfie Stick အနေနဲ့ ပါ နှစ်မျိုး သုံးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိဖုန်းနဲ့ ကွတ်တိဖြစ်အောင်လည်း ချိန်ထည့်လို့ ရပါတယ်။
(၈) Selfie Mirror
မှန်မှာ မိမိစိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်ပြီး အရှေ့ မှာ သွားရပ်ရုပ်နဲ့ မိမိပုံကို ရိုက်ကူးပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မှန်ရဲ့နောက်မှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ ကရိယာများ ပြင်ဆင်ထားတာ ဖြစ်ပြီး မိမိ ရုပ်ပြုံးပြလိုက်ရုံနဲ့အလိုအလျောက် ရိုက်ကူးသွားပါလိမ့်မယ်။
Posted by lin linn at 5:40 AM
Posted by lin linn at 5:38 AM
Add 100 သတင်းစုံ v2 Download
Add 100 သတင်းစုံ app သည် ပြည်တွင်း/ပြည်ပသတင်း ဗဟုသုတ အားကစား နည်းပညာ ကျန်းမာရေး အလုပ်ခေါ်စာ ရွှေဈေး ဒေါ်လာဈေး သတင်းများ ကို ၂၄ update တင်နေသာ
website ပေါင်း ၁၀၀ မှသတင်းများကိုစုစည်းဖော်ပြထားခြင်း
ဖြစ်ပါတယ် အောက်ကလင့်ခ်များမှာ အခမဲ့ Download ဖတ်ရှု့နိုင်ပါတယ်
Android 4.0 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
ဗားရှင်း2မှာ အသစ်ထည့်သွင်းထားတဲ့လိုင်းတွေကတော့
New Myanmar News (သတင်း)
PannPwint - News (သတင်း)
ဒေါက်တာအောင်မျိုး စာအုပ်စင် (ဗဟုသုတ)
The Ladies News Journal (သတင်း)
TechSpace Journal (နည်းပညာ)
JOB seekers Journal (အလုပ်ရှာဖွေရေး)
Popular News Journal (သတင်း)
FOOD Magazine (အစားအသောက်ဗဟုသုတ)
Myanmar Online Library (ဗဟုသုတ)
Posted by lin linn at 5:37 AM
သင့်ရဲ့ ဖုန်းမှာ STORAGE မကုန်စေဖို့ နည်းလမ်း သုံးခု
စမတ်ဖုန်းများမှာပါတဲ့ Storage ဟာ နည်းပါးတဲ့အတွက် ဖုန်းမှာ Apps နဲ့ ဂိမ်းများစွာ အသုံးပြုသူ၊ သီချင်း၊ ဗီဒီိယိုများ၊ Offline Map Data သိမ်းဆည်းထားသူများ အတွက် Storage ကုန်ဆုံးတဲ့ ပြဿနာကို ရင်ဆိုင်ကြရပါတယ်။ ဒီပြဿနာဟာ စမတ်ဖုန်း အသုံးပြုသူ အားလုံးအတွက် ဘုံပြဿနာတောင်ဖြစ်လာပါတယ်။ ဖုန်းမှာ Storage နည်းပါးခြင်းဟာ ဖုန်းကို နှေးကွေးစေသလို Apps များ Update ပြုလုပ်၍ မရခြင်း၊ ဓါတ်ပုံ ရိုက်၍ မရခြင်းတို့ကိုလည်း ဖြစ်စေပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဖုန်းမှာ Storage မကုန်စေဖို့ နည်းလမ်းကောင်း သုံးခုကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
၁။ သင့်ရဲ့ Internal Storage ကို ရှင်းလင်းပါ။
ဖုန်းရဲ့ Internal Storage ကို အဓိက အသုံးပြုတဲ့ အရာ သုံးခုရှိပါတယ်။
• Cached Data (System Cache, App Cache )
• User Data ( Music, Photos, Videos, etc )
ကံကောင်းတာက အဲဒီအရာသုံးခုစလုံးကို ထိန်းချုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးမပြုတဲ့ Apps များကို Uninstall လုပ်ပါ။ Caches နဲ့ မလိုအပ်တဲ့ ဖိုင်များကို ရှင်းလင်းပါ။ ဒီလိုအလုပ်တွေကို လွယ်ကူစွာ ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Apps များကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ SD Maid က အဲဒီအလုပ်တွေကို အလိုအလျှောက် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ES File Explorer က Android File System ကို အတွင်းကျကျ ထောက်လှမ်းနိုင်ပြီး Uninstall လုပ်လိုက်တဲ့ Apps များမှ ကျန်ခဲ့တဲ့ မလိုအပ်တဲ့ ဖိုင်များကို ရှင်းလင်းဖို့ သင့်ကို ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံ၊ သီချင်း၊ ဗီဒီယိုများပါတဲ့ User Data တွေကို အခြား Device များထံသို့ ကူးပြောင်းပါ။ ဥပမာအားဖြင့် DCIM , Music, Videos ဖိုဒါများကို သင့်ရဲ့ ကွန်ပြူတာထဲသို့ ကူးပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ သင့်ရဲ့ ဖုန်းကို ကွန်ပြူတာနဲ့ USB Cable ကနေ ချိတ်ဆက်ပါ။ ဖုန်းကို Unlock လုပ်ပြီး ဖုန်းမှာ မလိုအပ်တဲ့ ဖိုဒါနဲ့ ဖိုင်များကို ကွန်ပြူတာထဲသို့ ပြောင်းရွှေ့ပါ။ WhatsApp, Viber , Facebook Messenger ဖိုဒါများမှာ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ ဓါတ်ပုံများကိုလည်း ပြောင်းရွှေ့နိုင်ပါတယ်။
၂။ USB OTG သို့မဟုတ် microSD Card Adapter ကိုအသုံးပြုပါ။
Google က microSD Card အသုံးပြုမှုကို ကန့်သတ်ချင်ပေမယ့်လည်း microSD Card ကို စမတ်ဖုန်း ပိုင်ရှင်အားလုံးနီးပါးက အသုံးပြုချင်ကြပါတယ်။ သင့်ဖုန်းမှာ microSD Card Slot မပါရင်တောင် microSD Card ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။
microSD Card Slot မပါတဲ့ ဖုန်းများမှာ USB OTG သို့မဟုတ် microSD Card Adapter ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Adapter ကို Key Chain မှာ ချိတ်ဆွဲပြီး သွားလေရာယူသွားနိုင်ပါတယ်။ Android 6.0 Marshmallow မှာတော့ microSD Card ကို Internal Storage အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်အောင် ဆန်းသစ်ပေးထားပါတယ်။ Android Lollipop မှာ microSD Card ကို Adapter ထဲထည့်သွင်းပြီး ဖုန်းနဲ့ ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Internal Storage မှ ဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို၊ သီချင်းများကို SD Card ထဲ ကူးပြောင်းသင့်ပါတယ်။ microSD Card Slot မပါတဲ့ ဖုန်းများမှာ Adapter ကနေ တစ်ဆင့် Apps အချို့ကို microSD Card ထဲထည့်သွင်းနိုင်ပေမယ့် Sync လုပ်ဖို့အတွက်တော့ ပြဿနာရှိပါတယ်။
၃။ Cloud ကို အသုံးပြုပါ။
ဓါတ်ပုံနဲ့ သီချင်းများစွာဟာ သင့်ရဲ့ ဖုန်းမှာ နေရာယူထားရင်တော့ Cloud မှာ သိမ်းဆည်းပါ။ Google ရဲ့ Photos App အသစ်မှာ 16 MP နဲ့ အောက် ဓါတ်ပုံများကို အကန့်အသတ်မရှိ သိမ်းဆည်းခွင့်ပေးထားပါတယ်။ App က 1080p Full HD Video များကိုလည်း အခမဲ့ သိမ်းဆည်းခွင့်ပေးထားပါတယ်။ အခြား Cloud ၀န်ဆောင်မှုများစွာ ရှိပေမယ့် Photos ဟာ ရွေးချယ်စရာတစ်ခုပါ။ သီချင်းများအတွက် SoundCloud ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ SoundCloud မှာ အကောင့်ဖွင့်ပြီး သီချင်းများ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီး Device များစွာကနေ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် နားဆင်နိုင်ပါတယ်။ Cloud ကို အသုံးပြုရင် သင့်ရဲ့ Mobile Data များစွာ ကုန်ကျမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အခမဲ့ ၀ိုင်ဖိုင်များရရှိမှသာ Upload ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
ချစ်သူဖုန်းထဲက SMS ကို ခိုးကြည့်နိုင်မယ့် Total SM...
Hardware Course ဆိုင်ရာ Components များအကြောင်း(ဖိ...
LG G Stylo version 5.1.1 ကို ROOT လုပ်ချင်သူတွေအတွ...
ဆယ်ဖီချစ်သူများအတွက် အမိုက်စား ဆယ်ဖီ Gadgets (၈)ခု...
သင့်ရဲ့ ဖုန်းမှာ STORAGE မကုန်စေဖို့ နည်းလမ်း သုံး...
iFont (Expert of Fonts) 5.5.9 Unlocked Apk
Mobile Network System တွေ အကြောင်း တစေ့တစောင်း
ndroid ဖုန်းတချို့ Imobile နှင့်Huaweiများ setting...
ဖုန်းထဲကဘယ် ဆော့ဝဲလ် တွေကို စာလုံးနှင်းကာလာပြောင်း...
ZenFone5T00F/T00J Android 5.0 Lollipop ကို One C...
Frozen (modifined) Keyboard
Money Test & Time service error ကို apk နဲ့ ဖြည်ရှ...
Samsung Galaxy E7 ( Sm-E700H ) version 4.4.4 ROOT ...
MI Devices များအတွက် Fastboot Firmware Flashing Gu...
Mac OS X တွင် မြန်မာယူနီကုဒ်စနစ်သို့လွယ်ကူစွာပြောင...
Huawei Honor G620s-UL00 B247 & B248 ROOT
Money Test & Time Service Error Remove Tool ( Beta...
ပိုက်ဆံ မကုန်ပဲ ဖုန်း Free ခေါ် လို့ရမယ် ApK
New Black List Method (လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသောဖုန်းမှာ...
iCloud ပေါ်ရှိ Contacts များအား Android ဖုန်းပေါ်သို...
Android Device များအား adb ဖြင့် Screen Lock ပယ်ဖျ...
Clash Of Clans (COC) Gem ကို PayPal Account ဖြင့်ဝ...
Status Bar Mini PRO 1.0.140 APK
အမျိုးသား သုတ်ရည်လှူဒါန်းလျှင် နောက်ဆုံးပေါ် အိုင်ဖ...
iOS9 မှာ ဘက်ထရီပိုမို ကြာရှည်အောင် ပြုလုပ်ရမဲ့ အချ...
Instagram နဲ့ လက်တွေ့ အပြင်ဘဝ
Add 100 သတင်းစုံ 1.2 Download
How to Reset Ink Level For Any Canon Series
Jailbreak လုပ်ထားတဲ့ iDevice တွေမှာ PassCode မေ့ရင...
Myanmar to Thai Dictionary apk
2 SIM ဖုန်းတွေမှာ SIM တစ်ကဒ်သာ ပေါ်နေခြင်း
Offline Zawgyi To Unicode Changer
လက်နဲ့ထိရုံနဲ့ ဖုန်းပါဝါ ဖွင့်ပိတ်မယ်
အသုံးချကွန်ယက်နှင့် အဝေးလှမ်းထိန်းချုပ်ခြင်း နည်းပ...
YouTube AdAway v2.6.4 APK
Screen Recorder Pro 6.6 Cracked APK
Xperia Z နဲ့ ZL တို့ကို version 5.1.1 မှာ Root လု...
iOS9တွင် နောက်ကွယ်မှ လုပ်ဆောာင်နေသည့် အချက် ၁၂ ခ...
setting နောက်ခံထည့်မဲ့. apk
ဖုန်း setting နောက်ခံထည့်နည်း
Bay Din For Android
Myanmar Hacking Story _ App For Android
♪ Facebook က ၃၆၀ ဒီဂရီ ဗီဒီယို App ကို တီထွင်နေ ♫
Add 100 သတင်းစုံ 1.1 Download
Music apk ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးမယ်
Total SMS apk
Apple ရဲ့ပထမဆုံး Android App ကို Google Play ပေါ်မှ...
ခေါက်သိမ်းလို့ရမယ့် စမတ်ဖုန်း Samsung က ထုတ်မည်
Android စက်ပြင်ဆရာလက်စွဲ (ရဲမင်းအောင်-Ray Electron...
ဖုန်းထဲမှာ ဘယ်သူမျှမကြည့်ရအောင် password နဲ့ပိတ်ထာ...
ကိုယ့်ကွန်ပျူတာကနေ လွယ်လွယ်ကူကူ Wi-Fi ပြန်လွှင့်နို...
အပြင်းပြေ သီချင်းဆိုပြီး အသံသွင်းထားချင်သူတွေအတွက်...
Photo တွေကို Pdf file လုပ်ပေးမဲ့ apk
AIDE ကိုအသုံးပြုပြီး ဂဏာန်းပေါက်စက် APK ပြုလုပ်နည်...
Facebook တွင် Dislike (မကြိုက်ပါ) button နှိပ်လို့...
ISO ဖိုင်တွေကို CD/DVD ပေါ် Burn နည်း [PowerISO v6....
ဖုန်းအားသွင်းရင်း ပြောရင် ဘာဖြစ်သလဲ
Portable Wi-Fi Hotspot Premium v1.4.0.0 Cracked Ap...
♪ Android OS 5.0 အထိ အမှန်အကန် Root ဖောက်နိုင်တဲ့ ...
♪ ဖုန်းတစ်လုံးမှာရှိထားသင့်တဲ့ စွယ်စုံသုံး - Syste...